बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइए फेरि सत्याग्रह गर्ने डा. केसीको चेतावनी – Sulsule
बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइए फेरि सत्याग्रह गर्ने डा. केसीको चेतावनी
सुलसुले २०७८ जेठ २७ गते १६:४३ मा प्रकाशित
बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई अवैध रुपमा जबर्जस्ती सम्बन्धन दिइएको खण्डमा आफू नेपाल फर्केलगत्तै सत्याग्रह सुरु गर्ने डा. गोविन्द केसीले चेतावनी दिएका छन् । विगतमा पनि शिक्षा क्षे.त्रमा भएका अनियमितताका बारेमा आवाज उठाउँदै सरकारलाई खबरदारी गर्ने काम गर्दै आइरहेका अभियन्ता केसीले यमनबाट सरकारलाई यो चेतावनी दिएका हुन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरुलाई पनि उक्त अवैध निर्णय प्रक्रियामा संलग्न नहुन अपिलसमेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू र आफ्ना आसेपासेको कालो धनको लगानीबाट स्थापित संस्थाको स्वार्थपूर्तिका लागि राज्य कब्जा गर्ने खोजेका आरोप पनि उनले लगाएका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयले यसअघि नै पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिइसकेका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने पनि डा. केसीले आफ्नो विज्ञप्तिमा यस किसिमको अवैध कार्यको आफूले विरोध गर्ने पनि जनाएका छन् ।
२०८० सम्ममा सबै प्रदेश तहसम्म सरकारी प्रतिष्ठान वा मेडिकल कलेज नपुगेका ठाउँमा एउटा सरकारी मकेडिकल कलेज स्थापना गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रोकेको पनि आरोप लगाए ।
ललितपुरमा बुधबार २५ सय जनालाई कोभिडशिल्ड खोपको दोश्रो डोजलगाइँदै
गरिब देशहरुमा खोपको अभाव
निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने ३ हजार ४ सय ९ वटा सवारी…
नेपालमा थपिए २,२९७ जना कोरोना संक्रमित, ४६ जनाको मृत्यु
नेपालमा थपिए २,४४२ जना कोरोना संक्रमित, ५१ जनाको मृत्यु